Medjugorje: June 14, 2020, Our Lady nyere ozi a na Oriri Nsọ | EKPERE NA OZI
Medjugorje: June 14, 2020, Our Lady nyere ozi a na Oriri Nsọ
Childrenmụ m, unu ga-abụrịrị ndị mkpụrụ obi pụrụ iche mgbe ị na-aga oke. Y’oburu n’inwe onye i gaje inweta, i ghali elu dika o joy nu obi uto n’eru nso.
Luk 22,7: 20-XNUMX
Ofbọchị achicha ekoghi-eko bịara, nke a ga-achụ aja Ista n’aha. Jizọs zipụrụ Pita na Jọn sị: "Gaanụ kwadebere anyị Ememme Ngabiga ka anyị wee rie ya." Ha jụrụ ya: "Olee ebe ị chọrọ ka anyị kwadebe ya?". Ọ si, Mb ase i batara n'obodo, le, nwoke g meetzute gi, buru ite miri; Soro ya gaa n’ụlọ ebe ọ ga-aba ma ị ga-agwa onye nwe ụlọ ahụ: Nna-ukwu gwara gị: Olee ebe ọnụ ụlọ ebe mụ na ndị na-eso ụzọ m ga-eri Ista? Ọ g showgosi gi ime-ulo di n'elu, ọ di uku ma kwa nma; kwadebere ebe ahụ ”. Ha jere wee chọta ihe niile dịka Ọ gwara ha wee kwadebe Ememe Ngabiga.
Mgbe oge ruru, ọ nọdụrụ na tebụl ya na ndịozi ya wee sị: "Ọ na-agụsi m agụụ ike iso gị rie nri ngabiga a, tupu oke iwe m, n'ihi na ana m agwa gị: Agaghị m eri ya ọzọ, ruo mgbe ọ ga - eme mezuo alaeze Chineke ”. O we were iko, kele kwa, si, Naranu, kesara n'etiti unu: n'ihi na asim unu: site na mb thise a m'gaghi-a drinku nkpuru osisi vine, rue mb thee ala-eze Chineke gābia. Ya mere, mgbe o weere ogbe achịcha, kelee Chineke, ọ nyawara ya nye ha, na-asị: “Nke a bụ ahụ m nke e nyere n'ihi unu; Mee nke a na ncheta nkem ”. N'otu aka ahụ, mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ nara iko wee sị, "Iko a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ n'ọbara m, nke a wụsara n'ihi unu."
Nke gara aga Post Gara aga post:Nne anyi di aso na Medjugorje na-agwa gi mkpa Mass na Oriri Nsọ
Next Post → Post ozo:Onye na-arịa ọrịa kansa Lazaro gwọọ Padre Pio